सविन श्रेष्ठ भन्छन् – ‘अमेरिका घुम्न जान मन छ’ « Mero LifeStyle
सविन श्रेष्ठ भन्छन् – ‘अमेरिका घुम्न जान मन छ’
मेरो लाइफस्टाइल	||4September, 2021
अभिनेता सविन श्रेष्ठको घुमघाममा निकै रुचि छ । फुर्सद हुने बित्तिकै उनले देश तथा विदेशका घुमघाम योजना बनाइ हाल्छन् । त्यसो त उनले अहिलेसम्म ८ देखि १० वटा देश घुमिसकेका छन् । कोरोना अगावै सातामा एक दिन घुम्ने गरेका उनी अहिले महिनामा एकपटक साथीसँग घुम्ने गरेका छन् । तिनै घुमन्ते अभिनेतासँग मेरोलाइफस्टाइलले गरेको घुमघाम वार्ता :
अहिलेसम्म कति ठाउँ घुम्नु भयो ?
नेपालका अधिकांश ठाउँ पुगेको छु । नेपाल बाहिर ८ देखि १० वटा देश घुमिसकेँ ।
तपाईंको घुमघाम गन्तव्य कहाँ–कहाँ हुन् ?
देश बाहिर धेरै घुम्ने भनेको बैंकक र दुबई हो । देशभित्र पोखरा र धुलिखेल गई रहन्छु ।
घुमघामका लागि कसरी समय मिलाउनु हुन्छ ?
घुमघामका लागि मेरो साथीहरूको समुह छ । कोरोना अगावै साताको हरेक शनिबार उपत्यकाका र उपत्यका बाहिर घुम्न जान्थें । तर, अहिले महिनामा एक दिन घुम्न जान्छु ।
अहिलेसम्मको अविस्मरणीय घुमघाम कहाँको हो ?
सन् २०१६ सालतिर हो जस्तो लाग्छ । बैंककमा नाइट लाइफमा रमाइरहेका थियौँ । रङ्गीविरङ्गी लाइटहरू अचानक बन्द भयो, किन रहेछ ? बुझ्दै जाँदा त्यहाँको राजाको निधन भएकोरहेछ । त्यो मेरो लागि अविस्मरणीय घुमघाम हो ।
घुमघामको योजना कसरी बनाउनु हुन्छ ?
साथीहरूसँग उपत्यकामा नै घुम्न परेमा कुनै योजना हुँदैन । तर, बाहिर देशको लागि कति जना जाने, कहिले जाने र कुन–कुन ठाउँ घुम्ने महिना दिन अगाडि नै योजना बनाउँछु ।
घुमघाम गर्दा के–के बोक्नुहुन्छ ?
पहिला एक–दुई जोडी कपडा मात्र बोक्थ्ये । तर अहिले युट्युबमा ब्लकिङ गर्न थालेपछि क्यामेरा, पावरबैंक, गोप्रो, मोबाइल र चार्जर अनिवार्य बोक्छु ।
अरुलाई घुम्न जानका लागि कुन–कुन ठाउँ सिफारिस गर्नुहुन्छ ?
मलाई मनपर्ने घुम्ने ठाउँ दुबई, बैंकक र अस्ट्रेलिया हो यी ठाउँहरू नै सिफारिस गर्छु ।
घुमघामलाई कसरी रमाइलो बनाउन सकिन्छ ?
साथीहरूसँग घुम्न जाँदा यतिकै पनि रमाइलो हुन्छ । नयाँ–नयाँ ठाउँमा घुम्न रुचाउँछु । स्थानीय खाना खान र भाषा बोल्न रमाइलो लाग्छ । त्यसरी नै घुम्ने माहोल रमाइलो बनाउने गर्छु ।
घुम्न मन लागेको तर जान नसकेको ठाउँ कुन हो ?
अमेरिका जान एकदमै मन छ तर, पाएको छैन ।
नेपालमा घुमघामलाई प्रवर्द्धन गर्न के–के गर्नुपर्ला ?
नेपाललाई केही गर्न पर्दैन । यहाँ घुम्न लायक ठाउँहरू छ भनेर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सगरमाथादेखि लिएर सुन्दर वनजंगल यहीँ छ । बाहिरको पर्यटक आउनु भएमा उहाँहरूसँग मिठो बोल्ने र सव्य व्यवहार हामीले गर्नुपर्छ ।
कैलाश मानसरोवर पुग्ने इच्छा छ
मन मिल्ने साथीसँग घुम्दा रमाइलो हुन्छ
रुकुम, रोल्पा घुम्ने रहर छ : वर्षा राउत
गाउँले वातावरणमा छोराछोरीसँग घुम्न मन छ तर, जुरेको छैन –सञ्चिता लुइटेल